Ekpere nke izuike zuru oke. ? Ịdị jụụ na ndị acoụrụma
8 Mingụ Nkeji
Ebube siri ike A na-agwa Reinhold Niebuhr onye America bụ ọkà ihe ọmụma, ọkà mmụta okpukpe, na onye edemede.
Ekpere a nke ghọrọ nke ama ama na nkebi ahịrịokwu mbụ ya, sitere na Agha Secondwa nke Abụọ ọ bụ ezie na akụkọ ndị na-aga n'ekpere a dịgasị iche iche, eziokwu bụ na, dị ka ekpere niile, ọ dị ike ma na-enyere mmadụ niile aka Ndị na-arịọ n'ekpere na-ekwere na ihe anyị rịọrọ ka aga-enweta.
Ihe ọ bụla n’ezie akụkọ nke kara akara mmalite nke okwu ikpe ekpere ndị a, anyị kwenyere na ruo taa, ọ bara nnukwu uru nye ndị niile kwenyere ma na-ekwupụta okwukwe Katọlik.
Enyere anyị ngwa agha nke mmụọ ka anyị daba adaba na ya, ọ bụghị iche, kama ka anyị mee ihe, kpee ekpere ma kwere na Chineke na-eme ndị ọzọ.
1 Ekpere nzuzo Gịnị bụ ebum n’obi ya?
1.1 Ekpere nke izu ike zuru ezu
1.2 Serenity ekpere San Francisco de Asís
1.3 Ekpere na obi iru ala
1.4 Ekpere nke Serenity Alcoholics Anonymous: Abụ Ọma 62
Ekpere nzuzo Gịnị bụ ebum n’obi ya?
Obi iru ala bụ ọnọdụ udo zuru oke nke na-agabiga izu ike na-enweghị atụ.
Anyị enweghị ike ịsị na anyị nwere ahụ iru ala mgbe anyị nọ na-achọsi ike mgbanwe ndị anyị chere dị adị.
Nke ahụ abụghị ezigbo udo mana ọ bụ ọnọdụ ihu abụọ nke ọtụtụ mgbe anyị daba na-ezighi ezi ịnwa ịgbazite ihe anyị enweghị.
Ọnọdụ nke udo na ntụkwasị obi zuru oke na chi nke ahụ na-enyere anyị aka ịnọgide na-ekwere na ya n'agbanyeghị na anyị na-ahụ ihe anyị na-ahụ. Seren nwere na Chineke na - eduga anyị n’ikwere.
O nweghi uzo a gesi dozie obi mgbe anyi n’enwereghi na Chineke, izu-oke na ezi udo na-abia n’aka onye mara anyi site na mbu rue n’abia.
Ekpere nke izu ike zuru ezu
Chukwu, nye m obi ike ịnabata ihe m na-enweghị ike ịgbanwe, obi ike ịgbanwe ihe m nwere ike ịgbanwe na amamihe ịmata ihe dị iche; ibi ndu ubochi n’otu oge, na enwe otutu onodu oge; ịnakwere ahụhụ dịka ụzọ udo; na-arịọ, dịka Chukwu siri mee, n’ụwa nke mmehie a ka ọ dị, ọ bụghịkwa ka m si chọọ; nkwenye na will gha emecha ihe nile ma oburu na m nyefee Onwe gi dika uche Gi si di; ka m wee nwee ike were obi uto na ndu a, ju kwa gi obi uto ozo.
Jiri ike nke ikpere ahuke zuru oke.
Nkwuwa okwu n’oge ndia ebe nkasi obi nke ndu ubochi obula nke n’eme ka ayi taa bu ihe oma nke ayi gha agha agha idobe ya.
Enwere ike igosi anyị ọnọdụ ndị anyị onwe anyị chọrọ ohi udo, na-emebi obi, maka ihe ndị a, enwere ekpere pụrụ iche nke ịdị jụụ zuru oke.
Ọ dị mkpa na anyị matara na Chukwu anaghị eme nkera, na ọ nwere ike bụrụ na ugbu a anyị anaghị ahụ ọrụ ebube a ka emechara, anyị ga-aga n'ihu na-atụkwasị Chineke obi na ọ ma etu ọ ga-esi meere anyị iberibe oge a.
Serenity ekpere San Francisco de Asís
Onye-nwe-ayi, merem udiri nke udo-gi: ebe ikpọ-asì di, anam etinye ihu-n'anya, ebe nmeb ,u di, anamachọ mgbaghara, ebe esemokwu di, anamachọ ihe, ebe njehie di, etinye m ezi okwu, ebe enwere obi abua. okwukwe, ebe nkụda mmụọ dị, m na-etinye olile anya, ebe ọchịchịrị gbara, ana m etinye ọkụ, ebe mwute dị, etinye m ọ joyụ.
Nna m ukwu, ka m ghara ịchọ ka a kasie m obi ka a kasie m obi, ka a ghọta m dị ka m ga-esi ghọta, ka e wee hụ m n'anya dịka m ga-ahụ n'anya.
Nihi na enyere onyinye, ichefu acho, agbaghara agbaghara, ma inwu anwu rue ndu ebighebi.
Saint Francis nke Assisi bụ otu n'ime ndị nsọ nke ụka Katọlik hụrụ n'anya karịa ebe ọ bụla ngwa nke Chukwu ịgọzi ọtụtụ ndụ na ezinụlọ dum.
A maara ya dị ka ọkachamara n'ọnọdụ ndị siri ike, n'ime ndị yiri ka ha na-ezu udo anyị. Njem o mere n’ụwa ebe a na-edo onwe ya n’okpuru, mgbe o jiri obi nyefe ma na-echekwa olu nke Chineke.
A na-arịọ ya, n'etiti ihe ndị ọzọ, imeju anyị na nkwekọrịta, inye anyị ike ịhụ eziokwu na ịnọgide na-atụkwasị obi, ịnọgide na-ekwere na ọrụ ebube.
Remainnọgide n ’iru ala na ịnọ nwayọ nwayọ n’ihi na o nwere onye dị ike na-elekọta mụ na ezinụlọ m na ndị enyi m n’oge ọ bụla.
Nke ahụ kwesịrị ịbụ ekpere anyị, ikpe ekpere anyị kwa ụbọchị na n’agbanyeghi etu ihe niile si dị njọ, ka anyị mee ka obi ghara iru anyị ala ma kwenye na Chineke na-enyere anyị aka oge niile.
Ekpere na obi iru ala
Nna nke Elu-igwe, Onye huru n’anya ma nwee obi oma, Nna anyị nke dị mma, ebere gị enweghị nsọtụ, Onyenwe anyị nọnyere m, enwere m ihe niile m chọrọ, n’aka gị n’akụkụ m na-agbasi ike ma enwere m mmetụta isonyere, ya mere m na-arịọ gị ka ị bụrụ onye nwe anyị ulo, nke ndu anyi na nke obi anyi, bi n’elu ma na achi Nna nke Elu-igwe n’etiti anyi n’enwe anyi udo na obi anyi na obi anyi.
Me ……. Site na ntụkwasị obi zuru ezu n'ebe I nọ na ikwesị ntụkwasị obi nke nwatakịrị hụrụ Nna ya n'anya, ana m arịọ gị ka ị gbatịa ihu ọma gị ma gọzie anyị, jiri obi iru ala jupụta anyị, nọrọ na nchedo nrọ anyị, soro anyị n'abalị, lelee usoro anyị , duru anyi ubochi, nye anyi ahu ike, obi iru ala, ihunanya, onu, onu, mee ka anyi mara ka anyi kwesiri ikwudosi ike na inwe mmeko n’ebe ibe anyi no, na anyi no na-adi n’otu na ihunanya na ihunanya nakwa na anyi nwere n’ime ulo a udo na obi uto anyi na acho.
Kwe ka nwanyị ahụ a gọziri agọzi, nne nke Ọkpara Gị dị nsọ na nne anyị hụrụ anyị n'anya, kechie anyị uwe mkpuchi ya dị nsọ ma nyere anyị aka mgbe ọdịiche dị iche iche na-ewute anyị, kwe ka aka ya dị nro ma dị nro dọpụta anyị pụọ. mkparịta ụka na esemokwu, ka ya nọrọ anyị ka ọ bụrụ ebe mgbaba anyị mgbe nsogbu.
Onye-nwe ziga mmụọ ozi nke udo n’ụlọ a, ka o wee wetara anyị obi ụtọ na nkwekọ iji nyefee Udo ahụ nke only nwere ike inye anyị ma nyere anyị aka n’arụ anyị na nsogbu anyị, yabụ na n’etiti oke ikuku na banyere nsogbu, anyị nwere ike inwe nghọta n’ime obi na echiche.
Onye-nwe-ayi were obi uto ma nye anyi amara na ngozi gi, zitere anyi enyemaka gi n’oge onodu ojoo a ma mee ka nsogbu na ndiiche anyi n’abia nwere ezi ogwugwu, karie ka m na-ario mmesa-aka gi enweghi ngwụcha:
(jiri obi umeala jua obi ma choo ihe ichoro)
Ahapụkwala anyị n'ihi na anyị chọrọ Gi, ka ịhụnanya gị bara uru, ikpe ziri ezi na ike gị nọnyere anyị ma nye anyị nkwụsi ike oge niile; ka ndu gi bia duzie anyi ma gosi anyi uzo kacha mma, ka okwu gi megharia anyi site na ime ka anyi na ndi ozo di nma, nyere anyi aka ka ihu anyi na okwukwe na okwukwe sie ike na ndu anyi. Nye anyi ihe di nkpa ka n’abali obula anyi buru n’ura ura, anyi nwere ike kele gi maka ihe obula I nyere anyi.
Gbaghara mmejọ anyị ma nye anyị ka anyị biri na udo dị nsọ, ka mmiri nke ịhụnanya gị chebe anyị, ka nchekwube anyị tinye na Gị ghara ịbụ ihe efu, ntụkwasị obi anyị ga-agbasikwa gị ike mgbe niile.
Daalụ Nna nke Eluigwe.
Kpee ekpere nke ịdị nwayọ na ntụkwasị obi na okwukwe.
Chineke na-elekọta anyị mgbe niile, ọ bụ ya mere anyị ga-eji nwee ntụkwasị obi na ọ na-eme uche ya na ndụ anyị oge niile.
Anyi aghaghi ichegbu onwe anyi banyere inwe echiche nke udo mgbe nile, echiche nke na eweputa udo na ntụkwasị obi.
Uche bu agha ebe anyi na adabakariri oburu na anyi anwa igosi ndi ozo. Ọ bụghị ileghara ọnọdụ ahụ anya ma ghara ime ihe ọ bụla n'ihi na anyị tụkwasịrị obi.
Ọ bụ ime ihe na ntụkwasị obi zuru oke, na ntụkwasị obi na ịdị jụụ ọ bụ ezie na anya m na-ahụ ihe ọzọ, amaara m na Chineke, Nna nke Onye Okike na-eme ihe masịrị m oge niile n'ihi na ọ hụrụ m n'anya.
Ekpere nke Serenity Alcoholics Anonymous: Abụ Ọma 62
01 Site na choirmaster. Na ụdị Iedutún. Abụ ọma Devid.
02 Naanị na Chineke na-eme ka mkpụrụ obi m nọrọ ndụ, n'ihi na nzọpụta m si n'aka ya;
03 Naanị ya bụ oke nkume m na nzọpụta m, ebe me wusiri ike: Agaghị m ala azụ.
04 Rùe ole mb wille ka unu g outfeghari imegide madu, imebi ya dika mb yieldidi nāb orapu ma-ọbu mbousidi mbibi?
05 Ha n thinkchè èchìchita site n’elum, ha onwe-ha nāghaghi ezi nma: n'ihi na ọnu-ha ka ha gọziri, were obi-ha kọcha.
06 Nọrọ na Chineke, mkpụrụ obi m, n'ihi na ọ bụ olileanya m;
07 Naanị ya bụ oke nkume m na nzọpụta m, ebe me wusiri ike: Agaghị m ala azụ.
08 Isi n’ebe Chineke nọ ka nzọputam na nsọpurum di, Ọ bu oké nkume siri ikem, Chineke bu ebem.
09 Ndi ya, tukwasinu Ya obi, ka obi ya puta n’ihu ya, na Chineke bu ebe mgbaba anyi.
10 Menmụ-nwoke abụghị ume karịa ume, ndị oke-elu dị n’ile anya: ha niile nọ n'ọkwa ga-ebili karịa ọkụ.
11 Tukwasila obi na nmeb ,u, eme-kwa-la ihe-nzuzu; ọ bụrụgodị na akụ gị aba ụba, enyela ha obi.
12 Chineke ekwuwo otu ihe, ihe abua nke mu onwem nuru: «Na Chineke nwere ike
13 ma Onye-nwe nwere amara; na ịkwụ onye ọ bụla ụgwọ dịka ọrụ ya si dị.
E jiri nwayọ tụnyere ike ime ka obi jọrọ njọ n'etiti oke ifufe ahụ, nke ikwere na ịmara na Chineke na-elekọta anyị.
N’oge nkụda mmụọ ọ dị mkpa na anyị bu n’obi n’ekpere a, anyị nwekwara ike itinye ya n’ọrụ n’oge ọbụla.
O choghi otutu ebe ma obu ebe anyi ga-ekpe ekpere ma pere mpe mgbe ike gwu nkpuru obi ma obu obi ike.
N'ime udaume ndị ahụ anyị chere na anyị agaghị ejide ike, ekpere nwere ike ịgbanwe ụzọ akụkọ ihe mere eme na amara anyị, ị ga-ekwere.
Echefula inwe okwukwe.
Kwere na Chukwu na ike ya niile.
Kwere na ike site n'ekpere ruo n'udo zuru ezu. Naanị mgbe ọ ga-emeri oge ọjọọ.